Ohatrinona ny vidin'ny SEO? | Martech Zone
Ohatrinona ny vidin'ny SEO?
Alakamisy Janoary 5, 2012 Alatsinainy, 10 Jona, 2013 Douglas Karr
SEOmoz navoaka ny angona avy amin'ny masoivoho 600 mahery izay manao SEO ho an'ny mpanjifany. AYTM naka ny angon-drakitra ary nametraka azy tao amin'ny infographic, Ohatrinona ny vidin'ny SEO?.
Fitsangatsanganana iray izay niavaka nahita:
Ireo consultants / masoivoho "SEO" madio dia mety halazo ho toy ny orinasam-panompoana "marketing miditra" malalaka (manolotra SEO, sosialy, atiny, fiovam-po Analytics, sns) miakatra. Ny data dia naneho valinteny 150 (25%) nilaza fa nifantoka tamin'ny SEO indrindra izy ireo raha toa ka misy isa lehibe kokoa, 160 (26.7%), nanolotra sehatra midadasika kokoa.
Mahafinaritra ny mahita izany. Raha ny hevitro, masoivohon'ny marketing anatiny manaova asa tsara lavitra kokoa amin'ny toro-hevitra amin'ny mpanjifa amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana satria mifototra amin'ny valin'ny asa fa tsy miorina amin'ny laharana. Ny fifantohana amin'ny laharana fotsiny dia mety hiteraka olana maro… ao anatin'izany ny fironana hiantehitra amin'ny fivoahana amin'ny rohy mankany amin'ny lozam-pifamoivoizana, ny tsy fahazoana ny mpihaino kendrena ary ny fifantohana amin'ny teny fanalahidy avo lenta fa tsy ny fehezan-teny ambany, teny fanovana avo.
Tags: atymvidin'ny seoohatrinona ny vidin'ny seomasoivohon'ny marketing anatinyvidin'ny seoSEOseomoz
Mpivarotra havia havia sy havanana